Xiisada u dhexeysa Iraan iyo Israaiil oo siixumaaneysa | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xiisada u dhexeysa Iraan iyo Israaiil oo siixumaaneysa
Xiisada u dhexeysa Iraan iyo Israaiil oo siixumaaneysa
Markab laga leeyahay Israa’iil ayaa waxaa lagu duqeeyey badda Gacanka Al Carabiya, waxaana soo gaadhay dhaawac fudud, sida ay sheegeen ilo wareedyo dhowr ah.
Wasiirka gaashaandhigga ee maamulka Yahuuda ayaa tuhunsan in weerarkii ugu dambeeyay uu qeyb ka yahay olole cusub oo Iiraan ay ku bartilmaameedsaneyso maraakiibta Israel.
Markabka oo ah nooca xamuulka qaada, LORI, ayaa la weeraray xilli uu ka soo shiraacaday Tanzania una socday Hindiya isagoo wata calan shisheeye oo wali aan sidhab ah loo shaacin Dowladda Calankeeda markaabkaasi uu ku sfareyey.
War baahinta N12 News ayaa werisay. In weearkan uu xiisada sare marineyo waxay muujinayaan in markabku uu dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn ka sameeyay xeebta Cumaan habeenimadii xalay, waxaa ay iyana sidaasi oo kale wariyey shabakadda Difaaca Israel.
Ma jiraan wax dhaawac ah oo ka soo gaadhay weerarka markabkuna wuu sii waday safarkiisii ​​sidii loogu talo galay, wararka ayaa sheegaya, Khasaaraha soo gaadhay markabka si buuxda ayaa loo qiimeyn doonaa marka uu ku soo xirto Hindiya, waxaa sidaasi makale warineya N12.
Saraakiisha difaaca iyo milkiileyaasha xamuulka ayaa lagu wargaliyay dhacdada, sida ay warbixiinta sheegeyso, Doonta ayaa lagu soo waramayaa in ay leedahay shirkadda XT Management ee fadhigeedu yahay Haifa. Shirkadda ayaa ka gaabsatay inay ka jawaabto su’aalaha ay weydiisay masuuliyiin dhinaca Difaaca Israel.
Weerarka markabka ayaa daba socda qarax ka dhacay dibedda markab kale oo Israa’iil leedahay dhammaadkii bishii Febraayo. Israel ayaa Iran ku eedeysay dhacdada waxayna sheegtay in qaraxa uu ka dhashay miinooyinka badda hoosteeda la dhigo.
Saraakiisha ayaa ka digay kadib weerarkii hore in Israel ay ka aargudan doonto, Dhowr weriye ayaa soo sheegay in weerar xigay oo lala beegsaday bartilmaameedyada Iiraan ee Suuriya uu xiriir la leeyahay duqeynta markabka. Si kastaba ha noqotee, IDF ma aysan soo saarin wax qoraal ah oo rasmi ah taas.
Israa’iil ayaa hadda laga filayaa inay ku jawaabto xoog badan, maadaama dalku inta badan ku tiirsan yahay maraakiibta badda, umana muuqato inay aqbali doonaan olole socda oo ka dhan ah maraakiibta Israa’iil.
Isha Al Jazeera, Turjumadii by C/wahaab Aadan C/raxmaan.
Previous articleDubo oo war lagu qoslo Caawa ka soo yeeray
Next articleShirkii Shanta Maamul Goboleyd oo mar kale Galabta loo balamay